नेपाल आज | ओली राजा महाराजा भन्दा पनि निरंकुश बने, अब ढाल्नु पर्छ (भिडियोसहित)
शनिबार, ०४ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम पूर्व मन्त्री अमरसिंह पुनले वर्तमान सरकार राजा महाराजा भन्दा पनि बढी निरंकुश शैलीले अघि बढिरहेकाले अब सरकार ढाल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नेपाल आजसंगको विशेष साक्षात्कारमा नेता पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा दम्भ निकै बढेको र यसले लोकतन्त्रले समाप्त हुने अवस्था देखा परेको भन्दै उनको विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूले बोलेका अमर्यादित र असंसदिय शब्द रेकर्डबाट हटाउँदासमेत प्रधानमन्त्रीमा होश नखुलेकोमा आफू चकित परेको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेस रोल्पा जिल्लाका सभापति समेत रहेका नेता पुनले भने, ‘ भियतनाम र कम्बोडियाबाट फर्किए लगत्तै उनले आफूले असंसदीय शब्द नबोलेको भने । संसद्ले आफनो भनाइ नहटाएको भनेर झूठ बोले । यस्तो पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ ? आफूले बोलेको र त्यसमाथि कारवाही भैसकेको कुराको पनि जिम्मेवारी नलिने ?
नेता पुनले अगाडि भने, ‘ तपाई आफै हेर्नुहोस, भएभरका राज्यका महत्वपूर्ण निकाय आफू मातहत राखेको छ । ठूलाठूला परियोजना आफू मातहत राखेर सिधै ठेक्का लगाउने रे । यो भनेको को हो ? भ्रष्टाचार गर्नलाई होइन ? हुँदाहुँदा अब त प्रेस, मानवअधिकार र सुरक्षा निकायलाई पनि आफनो नियन्त्रणमा ल्याउन विधेयक ल्याइएका छन् । नियोजितरुपमा लोकतन्त्र समाप्त पारी निरंकुश बन्न खोजेका छन् ओली । ’
देउवालाई देखाएर भ्रष्टाचार लुक्दैन
मुलुकमा भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड छन् । बालुवाटारदेखि टुकुचा खोलासम्म कुनै सार्वजनिक जग्गा बाँकी छैन । सबै कब्जा गरेका छन् । के बालुवाटारको जग्गा विष्णु पौडेलको नाममा शेरबहादुर देउवाले हालेको हो ? आफना कर्तुत लुकाउन जहाँ पनि देउवाको नाम मुछ्ने ? यो सरकारले मुखले समृद्ध नेपाल भनेपनि आफू र माफियालाई मात्र समृद्ध बनाइरहेको नेता पुनको आरोप छ ।
‘परराष्ट्र नीति भन्ने केही छैन । कहिले भारतलाई विच्काएको छ, कहिले चीनलाई, कहिले अमेरिकालाई । होली वाइन खाएर तीन रात प्रधानमन्त्री होटेलमा सुत्छन् । विदेशीको गुलाम हुनुको पनि हद हुन्छ नी ? ’ नेता पुनको आक्रोश छ ।
नेता पुन भन्छन्, ‘सरकार मात्र होइन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि महारानी बन्न खोजेकीछिन् । प्रहरी तालिम केन्द्र हटाएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा रजाईं गर्ने, महङ्गा गाडी, हेलिकप्टर चाहिने । दुई पाइला कतै जानु पर्यो कि सडक तथा हवाई सेवा जाम गराउने ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तै हो ? विद्या भण्डारीको ठाउँमा कांग्रेसकातर्फबाट गएको कोही राष्ट्रपति भएको भए कम्युनिष्टहरुले सडकमा एउटा पनि रेलिङ बाँकी राख्नेवाला थिएनन् । लाज मान्नु पर्दैन यीनिहरुले ? ’
कांग्रेस र जागरण
नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको जागरण अभियान पार्टीको विधान र वर्तमान सरकारका खराब कर्मबारे जानकारी गराउनमै केन्द्रीत छ । विधानमा सर्वसम्मत नभएको अवस्था, भ्रातृ संगठनहरु व्यवस्थित नहुनु लगायतका कारणले सोचे अनुसार अभियान अघि नबढेपनि यसले कार्यकर्ता पङ्तीमा जागरुकता भरेको छ ।
नेता पुनले स्थानीय तहबाटै प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने र एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था लागु गर्न नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरी भएको औंल्याए । महासमिति बैठकले पारित गरेको र नेतृत्वले पनि आश्वासन दिइसक्दा पनि केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसलाई उल्ट्याउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अझैपनि अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु आफनो अडानमा यथावत रहेकाले अब १४औं महाधिवेशनबाट यसको टुंगो लगाउँछौं ।